Gary Wilson သည်စာရေးသူလူငယ်တစ် ဦး နှင့်အတူ oxytocin နှင့်အင်တာနက် porn အကြောင်းပြောခဲ့သည်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
လူငယ်တစ် ဦး စာရေးသူနှင့်အတူဤတွင်ဂယ်ရီ Wilson ရဲ့နောက်ကျော & ထွက်ပါပဲ oxytocin နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု။ သူကသူ့စာအုပ်ကြောင်းအတွက်ပြောဆိုချက်ကိုထပ်ခါတလဲလဲ oxytocin "အသုံးပြုသူကို porn မှနှောင်ကြိုး။ "
Gary BY ပထမဆုံးမှတ်ချက်
နောက်ဆုံးတော့ငါကအရေးမကြီးဘူးလို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ ______ ကိုအကြီးမြတ်ဆုံးလေးစားခဲ့ပေမဲ့သူမကြောင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုနဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံနေရတာကိုသူမထပ်ခါတလဲလဲတွေ့ရလို့စိတ်မကောင်းပါဘူး oxytocin အော်ဂဇင်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ငါတော်တော်များများရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ MDS နှင့် PhDs ကနေကြားရကြပြီသော်လည်း, ဒီသီအိုရီကိုပံ့ပိုးသောသိပ္ပံပညာ၏မဟုတ်တဦးတည်းဖျက်စီး၏ငါသိ၏။
oxytocin လူတစ် ဦး သို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အော်ဂဇင်တွင်ဖြန့်ချိခြင်းမဟုတ်ပါ - မိခင်များသည်ကလေးများကိုချစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်လူအများတို့သည်ပေါ့ပေါ့တန်တန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ၄ င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်“ နှောင်ကြိုးမရှိ” ခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်သူတစ် ဦး သည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်သရုပ်ဆောင်တစ် ဦး အပေါ်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံရသည့်ရှားပါးကိစ္စတွင်မှအပ oxytocin သူ့ကို porn ကိုအသုံးပြုဖို့သို့မဟုတ်ဖန်သားပြင်မှာကြည့်စေသည်ဘယ်အရာကိုမဟုတ်ပါဘူး။ စွဲလမ်းသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်နဲ့စွဲနှစ်ဦးစလုံး အဆိုပါဝေမျှ တူညီတဲ့ '' ကိုခေါ် key ကိုဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှု,ာင်း'' ဒါဟာ oxytocin ထုတ်လွှတ်မှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းကဲ့သို့သောကြီးမားသောဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောမြင်ကွင်းများ၊ အသံများ၊ အနံ့များ၊ ခံစားချက်များ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အမှတ်တရများအားအတူတကွပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ ဦး နှောက်သည်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုလာဘ်စင်တာကိုလွင့်စင်သွားစေမည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖန်တီးသောအခါအာရုံခံစားမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အချက်များသို့မဟုတ်အစပျိုးခြင်းများက activated သောအခါ, ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအဖြစ်ပြသရာ, အစွမ်းထက်, လျစ်လျူရှုရန်ခဲယဉ်း, ဖန်တီးဖန်တီးပေးပါတယ်။
compulsive porn အသုံးပြုမှုကိုလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်သင်၏အမျိုးအနွယ်နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျသွား၏အာရုံကြောဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော, ရှိသမျှအသစ်အဆန်းအကြောင်းပါ။
အသုံးပြုလိုသောဆန္ဒသည်“ ချည်နှောင်ခြင်း” မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကထဲကနေ ပုံမှန်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပျော်မွေ့လျှော့ချ sensitivity ကို အပျော်အပါး / ထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေး / သမျှ (ထိခိုက်လွယ်) ကတိပေးကြောင်းတွေကိုမှ hypersensitivity နှင့်အတူပေါင်းစပ်။ အကယ်. oxytocin အော်ဂဇင်မှာဖန်သားပြင်နှင့်အတူနှောင်ကြိုးအခြားဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ (သို့သော်မပေး porn) ကိုအသုံးပြုတဲ့သူအဘယ်သူမျှမရန်လိုအပ်သောခဲ့ကြသည်စှဲရလိမ့်မယ်။ တချို့သက်သေအထောက်အထားကြောင်းရှိပါတယ် oxytocin - လူများကိုသူတို့၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်“ ချည်နှောင်ခြင်း” မှချိတ်ဆက်ရန်ဝေးသည်မှာအကာအကွယ်ဖြစ်သည် ဆန့်ကျင် အဲဒါကိုအတုယူတဲ့မူးယစ်ဆေးကြွက်များတွင်စွဲတားဆီးရန်ဟန်သောဤအသစ်သောတွေ့ရှိချက်များအပါအဝင်စွဲ: https://www.thefix.com/could-အသစ်ဆေးလုံး-stop-စွဲ။ စစ်မှန်သောဆက်ဆံရေးကိုလည်းစွဲဆန့်ကျင်အကာအကွယ်ဖြစ်သကဲ့သို့ဤသည်မူးယစ်ဆေး, သဘာဝကျပါတယ်နှင့်စစ်မှန်သောဆက်ဆံရေးကိုအပေါ်သို့မှီခိုဖို့ပေါ်လာ oxytocin သူတို့ရဲ့ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်တချို့ဒီဂရီဖြစ်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမဖြစ်, သင်နှင့်ပတ်သက်။ သင်သည်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသင်တို့အပေါ်မှာမူတည်။ ၎င်းကိုသင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာစဉ်းစားသည်အထိ“ ကောင်းသောအသံ” ဖြစ်သည်။
သင်၏အတွေးများနှင့်အကြံပြုချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါဟာအများကြီးကိုဆိုလိုသည်။ ဒီသေးငယ်တဲ့အမှားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနေပါတယ် ငါကဲ့သို့သောကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုဒီဇိုင်းကိုချိုးဖောက်စေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နှောင်ကြိုးအကြောင်းအရာကိုငါချိန်ညှိရန်နောက်ကျလိမ့်မည်, သို့သော်ငါသည်သင်တို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုမြင်ငါ updated ဗားရှင်း, ဒါမှမဟုတ်ငါတ ဦး တည်းပြုလျှင်အခြားလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အတွက်ညှိပါလိမ့်မယ်။
ငါထင်တာက _____________ မှာစွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောအရာ ၀ တ္ထုအပေါ်တော်တော်လေးကြီးပြီးကြီးကြီးမားမားကြီးတယ်လို့ငါထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဟာဒီထက်ပိုပြီးအသေးစိတ်လေ့လာသင့်တယ်၊
စကားပြောခန်းမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွယ်တာမှုတစ်ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်စိတ်ချရသည့်လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ရေတိုကာလအပျော်အပါးခံနိုင်စွမ်းကိုယာယီတိုက်ဖျက်ခြင်းထက် oxytocin တစ်ဦးသရုပ်ဆောင်ရန်။ ဒီတစ်ခါလည်းရှိခဲ့ oxytocin သော်လည်း device ကိုမှ bonding? အချိန်ကပြောကောင်းပြောလိမ့်မည်။ ငါကအဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးသဘောတူသည် oxytocin ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာအသစ်အဆန်းကိုဘယ်လိုအခြေခံလဲဆိုတာပါ။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်အနှောင်အဖွဲ့သည်အမြဲတမ်းဖြစ်လေ့မရှိသော်လည်းတခါတရံတွင်၎င်းမှထွက်ပေါ်လာနိုင်ပြီး၊ အထူးသဖြင့်မင်းသမီးများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံမှုများဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီတော့ဒီနေရာမှာလူအများဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုမကြာခဏပေးသောကိရိယာနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအနည်းဆုံးညစ်ညမ်းစေသည့်ကိရိယာနှင့်မရရှိနိုင်ဘူးဆိုလျှင်ဤနေရာတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ စွဲလမ်းစေပေမယ့်ဆုတ်ခွာစိန်ခေါ်မဟုတ်တစ်ခုခု? သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းမှုမှတစ်ဆင့်အနှောင်အဖွဲ့နှင့်မသက်ဆိုင်သောအရာတစ်ခုခုမဟုတ်ပါ oxytocin အားလုံးမှာ)? မသေချာပါ။
ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရာပူဇော်သက္ကာကိုအဘို့ဤမျှလောက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုအံ့သြဖွယ်တနင်္ဂနွေရှိသည်နှင့်လာမည့်သီတင်းပတ်ညီလာခံပျော်မွေ့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီလူအပေါင်းတို့သည်သင်၏အလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ, သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ရန်သင့်စာအုပ်အကြံပြုကိုချစ်။
Gary BY SECOND တွင် COMMENT
နောက်ခံအနည်းငယ်။ ငါနဲ့ကျွန်တော့်ဇနီးဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာညစ်ညမ်းမှုရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအကြောင်းစရေးတုန်းက (YBOP ကို ​​၃ နှစ်ကြာမှဖန်တီးခဲ့တာ)၊ Candeo မှထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ "porn model" ကိုညစ်ညမ်းတဲ့ဓာတုပစ္စည်းများထုတ်လွှတ်နေပုံရသည်။ အမှန်တကယ်ကိုးကားချက် - ညစ်ညမ်း psychopharmacological ရေလွှမ်းမိုးအထွက်နှုန်း epinephrine, testosterone ဟော်မုန်း, နဲ့အတူ Endorphins (endogenous မော်ဖင်းအကိုက်), oxytocin, dopamine, serotonin ။
ဒီ model တွေနဲ့တော်တော်များများပြဿနာတွေ:
ပထမပြproblemနာ - ပြည်သူ့ဒီလုံ့လဝိရိယနှင့်မေးသော်, ဤစကားမှန်လျှင်, ထို့နောက်ဘယ်လောက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ vanilla လိင်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပုံမှန်ကှာခွားပါဘူး? အဲဒါကို "neurochemically" ကွာခြားပါဘူးကတည်းကဒီမျှတစ်ကျော့ပြန်ရှိ၏။ ထိုအခါကလူကိုမေးမြန်း, ဤအတူညီဓာတုပစ္စည်းလိင် / အော်ဂဇင်စဉ်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့နေကြသည်လျှင်, အဘယ်အရာကိုလိင်ထက်မဆိုကွဲပြားခြားနားသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစေသည်? တနည်းကား၊ တကယ့်အဖြေမှာအင်တာနက်သည်အဆုံးမဲ့အသစ်အဆန်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်၊ တစ် ဦး တစ်ယောက်အားတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ အဆက်မပြတ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်း၊ နောက်ထပ်ပုံရိပ်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းစသည်တို့ဖြင့် ၀ တ္ထုအမျိုးအစားများသို့အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိများအားလုံးသည် VTA-NAC dopamine စနစ်ကိုသက်ဝင်စေသည်။ စွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်မှုကိစ္စကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွခြင်း (ညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်မကိုက်ညီသော) နှင့် / သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ oxytocin တကယ်ဖြစ်စေတစ်ဦးကစားသမားမဟုတ်ပါဘူး။
ဒုတိယအပြဿနာ - “ အာရုံကြောဓာတုကော့တေး” နှင့်ပတ်သက်သောပြောဆိုချက်များသည်အပေါက်များစွာရှိသည်။ သို့မဟုတ်မမှန်ကန်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဒီညစ်ညမ်းရုပ်ပစ္စည်းတွေအားလုံးထဲကို ၀ င်လာတာကနှစ်ပေါင်းများစွာလိင်၊ နှောင်ကြိုး၊ Ybop ကိုမဖန်တီးခင်မှာကျွန်တော်ဟာစာအုပ်များ၊ ဆောင်းပါးများစွာကိုရေးသားခဲ့ပြီး၊ လိင်၊ နှောင်ကြိုးနှင့်အော်ဂဇင်ဆိုင်ရာ neurobiology ဆိုင်ရာသိပ္ပံကို ၁၀ နှစ်ကြာလေ့လာခဲ့သည်။ အကြောင်းပစ္စည်းအများကြီး oxytocin, prolactin, သငျသညျ (အထူးသဖြင့် 2010 မတိုင်မီ) က web ပေါ်မှာမြင်ကြပြီစေခြင်းငှါ testosterone ဟော်မုန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစောပိုင်းဆောင်းပါးတွေထဲကနေယူခဲ့ပါတယ်။ ငါလိင်စိတ်နိုးထ, Bond နှင့်အော်ဂဇင်နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း streaming ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားခြားနားချက်များနှင့် ပတ်သက်. အလွန်ရှင်းလင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်နောက်ကျောမှ oxytocin။ ကိုယ်ကသာလိင်စိတ်နိုးထကာလအတွင်းလူသား၏သွေးထဲတွင်တိုင်းတာခဲ့ပြီး, သာအနည်းငယ်လေ့လာမှုများအတွက်သိရသည်။ ဒါဟာဦးနှောက်ထဲမှာအကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ၏ဦးနှောက်နှင့်သွေးသတင်းရင်းမြစ် oxytocin ခန္ဓာဗေဒသီးခြားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, oxytocin သွေးထဲမှာလည်ပတ်နောက်ကျော (ထိုအသွေး-ဦးနှောက်-အတားအဆီးကြောင့်) ကဦးနှောက်သို့ကူးမထားဘူး။ အချို့လေ့လာမှုများပျံ့နှံ့နေတဲ့အတွက်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမပြောင်းလဲမှုရှိကွောငျးကိုပြသ oxytocin အော်ဂဇင်မှာ, လူအခြို့ပါ။
oxytocin ဘွန်းနှင့်အတူပါဝင်ပေမယ့်အများအပြားစမ်းသပ်ချက်စီမံခန့်ခွဲကြောင်းပြသမည်အကြောင်း, oxytocin နှာခေါင်းဖြန်းဆေးမှတဆင့်လူတစ်ဦးကိုယ်ရံတော်အပေါ်, ဒါမှမဟုတ်ပင်ရန်လိုအခြားသူတွေဆီသို့ဖြစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါကြောင့် oxytocin'' s ကိုသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်စပ်လွှမ်းမိုးမှု လူမှုရေးအခြေအနေနှင့်စိတ်ပြည်နယ်၏။
တစ်ခုအင်တာနက်ကိရိယာ Bond သည်, ထိုရိုးရှင်းစွာဖြစ်ပေါ်မထားဘူး။ ယင်းအဆိုကို porn အသုံးပြုသူကသူ၏လက်တော့သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူမေတ္တာ၌ယခုကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာစိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ မဆိုလုလင်ကိုမေးမွနျးခဲ့သညျဆိုပါက - "သငျသညျအခမဲ့ရှိသမျှတို့, ငါ့ကိုစျေးကွက်အပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်, အမြန်ဆုံး, အကောင်းဆုံး Laptop တစ်လုံးနှင့်အတူသင်၏ဟောင်းပင်ပန်းလက်ပ်တော့ကိုအစားထိုးချင်ကြဘူးသူကချက်ချင်းပဲ `` ဟုတ်ပြီ his လို့ပြောပြီးလက်ပ်တော့ပ်အဟောင်းကိုခိုးမပေးပါဘူး။ လူတစ် ဦး အားပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များ (ဥပမာ - လက်ပ်တော့ပ်ကိုဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်တော့ပ်ကိုမြင်ခြင်း) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုများကိုကြုံတွေ့ရသော်လည်း၎င်းသည်မလုံလောက်ပါ။ ၎င်းသည်အဓိကစွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်သည့် cue-reactivity - ာင်း.
အဆိုပါအော်ဂဇင် = oxytocin = ညစ်ညမ်းသောရုပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းသည်အထောက်အပံ့မရှိဘဲယုတ္တိမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများသည်ကွန်ပျူတာများနှင့်စောင့်ကြည့်သူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုမရှိကြပါ။ သို့မဟုတ်သူတို့ကပစ္စည်းအသစ်ကိုဘယ်တော့မှ ၀ ယ်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်းသည်ဖြန့်ဝေရန်မလိုအပ်ပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်လက်ပ်တော့ပ်ကိုသူမပေးသောအကြောင်းအရာမဟုတ်ဘဲချစ်မြတ်နိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်တွယ်ကပ်နေခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ၊ သို့မဟုတ်သူတို့သည်တူညီသောဗွီဒီယိုကိုထပ်ခါထပ်ခါကြည့်ပြီးအကြောင်းအရာအသစ်ကိုဘယ်တော့မှရှာမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာတကယ့်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ အသစ်အဆန်းရှာဖွေခြင်းဟာနှောင်ကြိုးရဲ့အာရုံကြောဆိုင်ရာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာတွဲဆက်ပြီးတစ် ဦး ချင်းထိတွေ့မှုက dopamine & endogenous opioids ကိုထုတ်လွှတ်သည်။ အဲဒါကိုအချစ်လို့ခေါ်တယ် ထိုကဲ့သို့သော voles အဖြစ် Pair-bonded တိရိစ္ဆာန်များ, မကြာခဏ၏ voles တိုက်ခိုက်ရန်ပါလိမ့်မယ် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်။ သူတို့ကအသစ်အဆန်းချင်ကြပါဘူး။ oxytocin pair တစုံ-Bond ဘို့လိုအပ်ပေသည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူအသုံးပြုသူလျင်မြန်စွာတူညီတဲ့ပုံသို့မဟုတ်တူညီသောဟောင်းကဗီဒီယို (ရန် habituatesအားလုံးလေ့လာမှုများလည်းဒီပြသ) ။ အာရုံကြော, လေ့ဖြစ်ပါတယ် dopamine တစ်ကျဆင်းမှုသို့မဟုတ်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့။ ရုပ်ပုံအသစ် (သို့) ဗွီဒီယိုအသစ်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်သစ်တစ်ခုနှင့်ထိတွေ့သောအခါ၎င်းသည်ဝဘ်ဆိုက်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်သည် - dopamine ဆုလာဘ်စနစ်သည်သိသိသာသာတိုးပွားစေသည်။ မျက်နှာပြင်အခြေပြုဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်တစ် ဦး အတွက် dopamine (နှင့် norepinephrine ဖြစ်နိုင်ခြေ) ပေါက်ကွဲမှုသည်စုံတွဲတွဲခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်အာရုံကြောဆိုင်ရာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ငါအားလုံးဒီအကြောင်းဒါကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်သန်းဖြစ်ကြောင်းကို? အဆိုပါ naysayers "ဒီအထူးသဖြင့်တိုင်ကြားမှုကိုအသုံးပွုနိုငျသောကွောငျ့ထို oxytocin ညစ်ညမ်းဖို့ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အသုံးပြုသူpseudoscience ၏အဓိကဥပမာအဖြစ်။ သူတို့ကဒီတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတည်းကို crackpot အဖြစ်ပြောဆိုသူကိုထုတ်ပယ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ညွှန်ပြနိုင်သည်။ ဒီတောင်းဆိုမှုတွေအများကြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ငါပြောတာ ၁၀ နှစ်ရှိပြီ။